Zvirango zvehupfumi ngazvibve | Kwayedza
22 Oct, 2020 - 09:10	 2020-10-22T09:33:07+00:00 2020-10-22T09:33:07+00:00 0 Views
SANGANO rinomirira vemabhizimisi kwaSeke, reSeke Constituency Business Development Trust, kuMashonaland East rinoti zvirango zveupfumi izvo zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika dzekumavirira zvinofanirwa kubviswa sezvo zvakonzera matambudziko akawanda kuvanhu vemunyika muno.
Cde Masimba Rubatika (56), avo vanova sachigaro wesangano iri, vanoti nguva yakwana yekuti zvirango izvi zvichibviswa.
“Hatina chatisina munyika yedu yeZimbabwe kubvira kuzvicherwa, zvipfuyo, makambani nenzvimbo dzinoyevedza idzo dzinokwezva vashanyi asi zvose zviri kutadza kufamba zvakanaka kuburikidza nezvirango zveupfumi izvi,” vanodaro Cde Rubatika.
Vanoti zvirango izvi zviri kukonzera kutambura kukuru kwevanhu vemuno.
“Vemabhizimisi tave kutadza kufambira mberi nebasa redu nekuti zvatinofanirwa kushandisa hatizviwane munyika muno nekuda kwekuti hatikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvizere,” vanodaro.
Cde Rubatika vanoti nekuda kwekuomerwa neupenyu, vamwe vechidiki vave kutsvaga nzira dzekutsaudzira dzekurarama izvo zvave kuita kuti vapedzisire vapara mhosva.
“Vechidiki vakawanda havasi kuwana mabasa kunyangwe vakapedza dzidzo kuzvikoro zvepamusoro.
“Nhunzvatunzva nenhubu dzawanda nekuda kwezvirango izvi, vamwe vave kuguma vasungwa voenda kumajeri vachisiya mhuri dzichitambura.”
Cde Rubatika vanoenderera mberi: “Zimbabwe inyika yaizivikanwa iri pamusoro muAfrica munyaya dzeupfumi nekurima izvo zvadzoserwa kumashure nezvirango izvi. Saka tinoda kuti zvirango izvi zvibviswe nyika yedu idzokere pakuva dura rechikafu mudunhu reAfrica nepasi rose.”
Nyika dzemubatanidzwa weSadc gore rapera dzakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekubatana neZimbabwe mukutaura nezwi rimwe chete kuti zvirango zveupfumi izvi zvibviswe.